Sonkorowga Uurka (Gestational Diabetes)
Author Topic: Sonkorowga Uurka (Gestational Diabetes) (Read 29739 times)
« on: February 25, 2009, 10:06:56 PM »
Waa Maxay Saraynta Sonkorta Dhiigga?
Saraynta sonkorta dhiigga macnaheedu waa macaanka (sonkorta) oo ku badan dhiigga. Waxaa kale ood maqli kartaa erayga "Hyperglycemia." Haweenka qaba sonkorowga haddana Uurka yeesha, iyo haweenka ay sonkorta ku dhacdo intay uurka leeyihiin, oo la yiraahdo Sonkorowga uurka waxay u baahan yihiin inay heerka sonkortooda xukumaan.
Haweenka uurka leh, heerka sonkorta dhiiggu waxay u baahan tahay in lagu hayo xadka qiyaasta oo yar una dhexeeysa 60 ilaa 120. Subaxii markaad toosto ugu horaysa, sonkorta dhiiggaaga waa inay ahaato 60-100. Marka aad cabirto sonkortaadu cuntada ka hor waa inay noqotaa 60-105, iyo 2 saac ka dib cuntada, 60-120. Markasta oo sonkortaadu ka badan tahay 120, aad ayey ugu badan tahay Uurka.
Haddii ay wakhtiga Uurka sonkorta kor u kacdo, waxaa surtogal ah in ay dhib u keento hooyada iyo cunuggaba.
Dhibaatooyin wadnaha, lafdhabarka iyo xubnaha kale oon si fiican u sameysmin bilaha hore ee Uurka hadday hooyadu qabtay saraynta sonkorta dhiigga markay Uurka yeelatay.
Sonkorta aad ugu badan hooyada waxay cunugga u keenta isago aad u weynaada oo keena:
Sambabada cunugga oo si ayar ah u kora
Khatar in uurka dhicisoobo
Khatar dhaawac inta dhalidu socoto
Hoosayn sonkorta dhiigga oo cunugga marku dhasho
Khatar ilmaha uurka ku dhinta
Hadday hooyadu si xun u kontroshay sonkorowga Uurka wuxuu dhibaato gaarsiiyaa indhaha, kaliyaha ama wadnaha, way ka sii xumaan karaan inta uurku socdo.
Gariir iyo miyir doorsoomid ayaa aad caan ugu ah. Cadaadin badan ayaa kaliyaha ku dhacay tanina waxay keeni kartaa dhiig kar, barar iyo dhalid soo hormarta.
Haddii cunugu wayn yahay oo keentay saraynta sonkorta dhiigu,qallin (uur-doox) baa laga yaaba in looga dhaliyo.
Maxay Saraynta Sonkorta Dhiiggu u Dhcdaa?
Inta uurku socdo, jirkaagu wuxuu u baahan yahay Insulin badan, khaasatan saddexda bilood oo ugu dambaysa.Waxaa jira dhowr sababood oo keenta saraynta sonkorta dhiigga. Sababaha ugu caansan inta uurka socdo waxaa ku jira:
Isbedelka hormoonaha inta uurku socodo
Adiga cuna cunto ka badan qorshahaaga cuntada
Cunida cunto sonkorta ku badan yahay ama karbohaydraytku ku badan yahay
Qaadasho la'aan daawo kugu filan (insulin)
Dhaafid, ka boodid ama ka daahida daawada (insulin)
Helitaan la'aan jir-dhis ku filan
Waxaa xataa dhici karta marar aadan u helayn sababta keenta saraynta sonkorta dhiigga.
Sidee Baan Dareemayaa Marka Sonkorta Dhiiggu Aad U Sarayso?
Ma dareemaysid wax gooni ah marka sonkorta dhiigaagu aad u sarayso.Waa sababtaas waxay ay muhiim u tahay inaad fiiriso sonkorta dhiigaaga sida ay dhakhtarkaaga iyo kalkaalisadaadaba kugu waaniyaan. Inta badan haweenka uurka lehi ee sonkorowga qaba waxay fiiriyaan sonkorta dhiigooda 4-8 goor maalin kasta, cuntada ka hor iyo 2 saac cuntada ka dib.
Haddii heerka sonkorta dhiigaagu ay ka kormarto 120 sedex beri ka badan oo isku xigta adiguna aad raacayso cuntadaadii, waa inaad la xiriirta dhakhtarkaagii ama kalkaalisadaadii. Waxaa laga yaaba inaad u baahan tahay insulin inaaad bilowdo ama haddii aad insuliin qaadato, qiyaastaada waa in la bedelaa.
Maxaan Sameeyaa Markaan Qabo Saraynta Sonkorta Dhiigga?
Sida ugu wanaagsan ee lagu daaweeyo saraynta sonkorta dhiiggu waa adigoo isu dheeli tira cuntada, jimicsi iyo/ama insuliinka.
Sidee Baan Uga Hortagi Karaa Saraynta Sonkorta Dhiigga?
Waxaad uga hortagi karta saraynta sonkorta dhiigga adoo raaca qorshaha sonkorowga.
Raacida qorshahaaga cuntada
Qaadashada insuliinka sidii laguu faray
Sonkorta oo joogto u baartid
Raacida xarakaadkaaga iyo jimicsigaaga si joogto aha
La xiriirida dhakhtarkaaga haddaad aragto calaamada saraynta sonkorta dhiigga.
Raacida qorshaha xanuunkaaga haddaad xanuunsantahay.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan qoraalkaan, halkaan ka waydii.
Views: 65260 June 28, 2015, 11:26:21 AM
Views: 32477 March 30, 2011, 01:35:12 PM
Views: 15363 May 14, 2011, 10:14:27 PM
Views: 17188 July 05, 2016, 11:28:25 AM
Views: 25109 June 22, 2009, 08:13:49 AM